Zeziphi ezona zinongo zisetyenziswayo eIndiya? | Ukuhamba kwe-Absolut
Ihlabathi leziqholo liyamangalisa. Ndiyakuthanda ukuvula ikhabhathi yam yasekhitshini ndize ndinuke amavumba amnandi eengqayi ezininzi endizigcinayo, kodwa ndiyazi ukuba azinakuthelekiswa ezona ziqholo zisetyenziswayo eIndiya.
Hayi indlela okumnandi ngayo ukutya okuphekwe kakuhle kusapho lwaseIndiya! Umlomo wam unkcenkceshela ngokucinga ngale mibala kunye namavumba amnandi ... Uyayithanda i Cuisine yaseIndiya? Ke, siza kwazi namhlanje zezona ntlobo zisetyenziswa kakhulu eIndiya.
1 I-Indiya kunye nehlabathi layo elimnandi
5 Ipelepele emnyama
8 I-Nutmeg kunye ne-mace
9 Imbewu yemostade
10 Fenugreek okanye fenugreek
I-Indiya kunye nehlabathi layo elimnandi
La indian gastronomy Isebenzisa amawaka eziqholo, umhlaba kunye nokungangqini, iyodwa okanye idibene nabanye, ke ngamanye amaxesha inokoyikisa ukwenza isidlo saseIndiya ekhaya. Kodwa ukuba uqhelisela kancinci kwaye uyakwazi ukubabona, uya kuba sele ufikile indlela ende.
Iingcali kwizidlo zaseIndiya zithi Kukho iziqholo ezili-11 ngokusisiseko ezisetyenziswa ngokubanzi kwizidlo zaseIndiya. Uninzi lusetyenzisiwe yomile kwaye igosa ukuze zikhuphe iioyile zazo ezifanelekileyo ngaphambi kokuba zenziwe emhlabeni kwaye zongezwe kwindibaniselwano nezinye iziqholo.
Nangona ukusetyenziswa kodaka kwakudala, namhlanje kulula kwaye kuyacetyiswa ngakumbi ukusebenzisa irobhothi yasekhitshini ukufezekisa ukugaya okuhle. Inyani yile yokuba ezinye iziqholo, umzekelo i-cassia bark, inzima kakhulu kwaye ngodaka kunzima kakhulu ukuyigaya.
Ukufunda ngeziqholo kubalulekile kuba ukutshintsha indlela yokupheka kunokwenza ukuba iintlobo zibe nencasa eyahlukileyo, okanye ngendlela efanayo, ukuyibeka kwenye indawo ekulungiseleleni kunezinye iziphumo.
Ngokucacileyo zininzi ezinye iintlobo, ezingama-40, hayi ishumi elinanye kuphela, kodwa ezinye zinqabile okanye zisetyenziswa kuphela kwimimandla ethile, umzekelo, intyatyambo yelitye. Yiyo loo nto sinako ukugxila kwisuntswana lama-24 eziqholo ezifunekayo ezivela kwizidlo zaseIndiya nakwizithethe zokupheka zeenkulungwane ezidlulileyo, kwaye ukusuka apho sinokwenza elinye iqela 11, esetyenziswa kakhulu.
Kukho iindlela ezimbini zekhadiyamom ezisetyenziswa Indian gastronomy: luhlaza kunye nomnyama. Oluhlaza yeyona nto ixhaphakileyo kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimixube yesinongo nakwiindawo zokutya eziqhelekileyo. Ikhadiyamam eluhlaza inombala okhanyayo, oswiti, kunye nenqaku le-eucalyptus. Inokudityaniswa iphelele xa usenza uxube, njengakwiGaram Masala yesiqhelo. Kwakhona, xa uyisebenzisa kwiidizethi kunye neelekese, imbewu evulekileyo inokusetyenziswa.
I-cardamom emnyama inamandla kakhulu kwaye iyatshaya kwaye ewe okanye ewe kuya kufuneka uyisebenzise ngononophelo. Zimbalwa iimbewu ezisetyenzisiweyo kwaye ukuba usebenzisa yonke ipod kufuneka uyisuse ngaphambi kokuhambisa isitya kuba ukuba uyasiluma, ukulunga kwam.
Ikwayindidi yeklasikhi, ene umoya we-anise, Iyaziwa kakhulu kwizitya zaseIndiya. Incasa kunye nevumba lazo zivela kwioyile eyomeleleyo efunekayo, phantse iyeza. Isikhuselo yintyatyambo kwaye iioyile zayo ziyacinezelwa kwaye ziyakhutshwa ngaphambi kokuba zisetyenziswe ekuphekeni.
Zingasetyenziselwa ngokupheleleyo okanye zixutywe nezinye iziqholo kwaye akufuneki ulumke kuba zithambile. Isitya se-clove yakudala yiKerala Coconut Chicken Curry.
Ikwaziwa njenge Isinamoni yasechina, nangona isinamon yahlukile. Ikasiya kubiza ixabiso eliphantsi ukuvelisa Kwaye okunene, uninzi lwesinamon yomhlaba oyifumanayo ngokwenene iveliswa kwi-cassia bark.
AmaIndiya asebenzisa ikasiya endaweni yesinamon ekuphekeni, esebenzisa incasa yawo ebukhali, kwaye ayisebenzise ngobuninzi. Inokusetyenziswa kwakhona iinkozo okanye umhlaba kwaye idityaniswe nezinye. Inokungqinelana okungathethekiyo kunesinamon kwaye kulula ukujonga ukuba intsha okanye akunjalo: ukuba uyayigcoba phakathi kweminwe yakho kuya kufuneka ukwazi ukunuka ivumba lesinamon ukuba intsha.
I-Mughlai paneer curry yenziwe nge-cassia crust.
Ndiyayithanda ipepile emnyama. Inzalelwa eIndiya, Ukusuka kwimimandla yaseMalabar naseNtshona Ghats. Inyaniso kukuba sisiqholo ukuba kubiza imali eninzi ukukhula kuba ixhomekeke kakhulu kwindalo nakwimijikelezo yayo. Kungenxa yoko le nto inamaxabiso ahlala ahluka.
Ipelepele emnyama kufuneka yosiwe ngaphambi kokuba isetyenziswe kwaye ihlala ihleli, kubhetele ukuyifumana okuziinkozo uze uyigaye kancinci ngaphambi kokuyisebenzisa. Kuhle kakhulu kwinkukhu yenkukhu yaseNdiya.
Ndiyayithanda ikumin, ngakumbi njenge-marinade yenkomo yomhlaba. Ikumin isetyenziswe eIndiya iphelele okanye ixutywe nezinye iziqholo kwaye isetyenziselwa ukunika ithoni yokutshaya kwiitya ezininzi zaseIndiya. Imbewu yayo imdaka kwaye inuka kamnandi.
Kungcono ukusebenzisa ikumin entsha ukuba sifuna incasa ebukhali ngakumbi. Itshisa ngokulula, ke lumka xa uyosa. Ukuba idlulisiwe, ikumin iyakrakra. Eyona nto ilungileyo yimizuzwana engama-30 yokukhanyisa i-toasting kwaye ivumela ukupholisa ngaphambi kokuyisebenzisa.
Le yenye yezona ntlobo zindala zaziwayo emhlabeni, kunye nayo umbala wegolide, isongo salo citric kunye noburhabaxa bayo oburhabaxa. Iinkozo zecoriander zisetyenziswa njengesiseko sezinongo ezininzi, kodwa umgubo wekhoriander yenye yeentlobo ezisetyenziswa kakhulu kwizitya zaseIndiya.
Njengakwimeko yekumin, kuya kufuneka uthambise into encinci de ibe nsundu ngegolide kwaye imbewu iqala ukutsiba kancinci epanini. Inkukhu iTikka Masala iklasikhi.
I-Nutmeg kunye ne-mace
Zombini zisetyenziswa ngokubanzi kwi-Indian gastronomy. I-nutmeg entsha iqhutyelwa ukususa ingaphandle kunye nokususa iingubo. Ingaphandle elinzima eligubungele iimbewu linokuqhekeka ngaphambi kokugaya kwaye libe mace. Oko kukuthi, i-mace ligobolondo le-nutmeg.
Xa isomile, ifumana ithoni phakathi kwegolide kunye neorenji kwaye yongeza incasa efudumeleyo egudileyo kumalungiselelo. Kwelinye icala, xa i-nutmeg yomile ihlala ixesha elide ke kuyacetyiswa ukuba uyithenge ngqolowa kwaye uyikrobe ngokuthe ngqo kwipleyiti okanye kulungiselelo.
Kunqabile kakhulu ukusebenzisa i-nutmeg esele isemhlabeni kuba xa sele ivukuziwe ilahlekelwa ngamandla, kutheni? Inyama ene-curry ye-massaman ine-nutmeg.
Iimbewu zinokuba mnyama, zimdaka okanye mthubi kwaye zithengiswa ngokubanzi kwi-Indian cuisine. Imbewu ikhupha incasa yayo xa isemhlabeni okanye iphekwe kwioyile. Banambitha njengokutshaya kwaye zisetyenziswa kakhulu kwii-curry kunye ne-curry powders.
Kwakhona ioyile yemastadi isetyenziswa ngokubanzi kukutya okumaNtla eIndiya.
Fenugreek okanye fenugreek
Luhlobo olo kungabikho kwi-powder yaseMadras. Yimpawu ephezulu yevumba layo kunye nencasa. Imbewu yesi sityalo ityheli kwaye yomile kwaye isetyenziswa njengesiqholo, esidla ngokubizwa kasurimethi.
Imbewu inamandla kakhulu ke kufuneka ulumke ekusebenziseni kwayo, njengakwii-clove. Zikwasetyenziswa kunyango lwesintu nakwisiraphu engeyiyo yemephu efumaneka e-India.
Kuqheleke kakhulu eIndiya, inokusetyenziswa intsha okanye eyomileyo. Inezibonelelo ezininzi zempilo kwaye isetyenziswe kwii-curries kunye nakwimixube emininzi yeziqholo. Inencasa eyomeleleyo intsha kunokomileyo kwaye ibala ngokwaneleyo, ke kuya kufuneka ulumke xa uyiphatha.
Inevumba elimnandi elisemhlabeni, kwaye lisetyenziswa kwimilinganiselo encinci ukunika ikheri umbala otyebileyo wegolide. Amaqanda eBhruji ane-turmeric kuwo.
Sele siyazi, zezona ntlobo zibiza kakhulu emhlabeni. Ixabiseke ngaphezulu kwegolide ngobunzima bayo kwaye ukuba uyazibuza ukuba kutheni, kungenxa yokuba kuthatha umsebenzi omninzi ukuvelisa. I-Saffron kwihlazo leentyatyambo zesafron kwaye kufuneka ikhuliswe ngesandla.
Isafron efanelekileyo ibomvu ebomvu kwaye ivela eSpain, eIran okanye eKashmir. Kuyaphola, kokukhona umbala obomvu ungaphezulu. Inencasa eyahlukileyo, kodwa ivumba liyahluka ngokempumlo nganye. Kweminye iyinto yeentyatyambo, kwabanye inezinto zobusi ... Ngapha koko, isafron inamandla kwaye isetyenziswa kumanani amancinci. inyibilikisa kuqala emanzini okanye kubisi.
Ngaba unesibindi sokudlala ngezi iziqholo zaseIndiya ekhitshini lakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Zeziphi ezona zinongo zisetyenziswayo eIndiya?
Imidlalo edumileyo eNgilane